Odaygii gabadha Soomaalida ku garaacay baska oo la xukumay | Somaliska
Haddii aad xasuusataan bishii May ee sanadkaan waxaan soo qornay warbixin ku saabsan gabar Soomaali ah oo nin oday Swedish ah uu ku garaacay baska dhexdiisa iyada oo telefoonka ku hadlaysa magaalada Gävle. Gabadhaas oo lagu magacaabo Halimo Ali Hussein ayaa hada laga abaalmariyay dambigii laga galay.
8000kr waxba ma ahaa.. manta hadu qof somalia qof cadaan aah cayi laha xta asago gacan saarin aya 80000 lagu ganaxi lahaa.
8000 garanay e maxa kalo lagu ganaxay ??
8000 mise 80.000 jimcale qiimaha lacagta xaqiiji nin gabarta ugacan qaaday oo caayay sidee 8000 loogu xukumaa maxkamada dib haloogu noqdo iyadaaba cunsuri ah.
Waa 8000 (sideed kun) lama xirin ee magdhow iyo ganaax ayaa lagu xukumay.
Alx dheh mar hadii la xiray lacag waxba maaha ee anaga inuu xabsi ku uro aa noo muhiim ah
Jimcale marka hore wan ku salamay bror ani waxan dhihi lahaa. waa okei wayo wadamada kale lagama helo cadalada talo sweden
Sxb somaliska webkaan anigoo jogo Afrika baa ku xirnaajiray aniga iyo asxab badan oo hada ku nool sverige
Asc walal aniga hadan hadlo rayigeyga waxan oranlaha xalimo in eey iska deyso 8000 kun sided kun lacag ma ahaan umana dhiganto dhibti logestay waxa ka ficnanlahed in hal bil o xariga laxukumo badalki 8000 lasin laha tasi ilama ahaan cadalad
Sideed kun inlasiiyo xaliimo iyadaa iskugu wacan. Sababtoo ah meeysan doonayn ninka ineeyba dacweyso marka hore kadib ayaa saxibadeed kula taliyeen iney dacweyso. Taasi waxaa ku cad tumida latumay ineey kuqanacday lol
Waan ku faraxsanahay inantan cadaaladda heshay iyo ninkan laga abaalmariyay qaladkii uu galay. Intaas waxaa ku dari lahaa – waxaa u fiican Soomaalida qurbaha joogta sida Sweden inay fahmaan dhaqanka dadka ay la nool yihiin – islamarkaana ay ixtiraamaan. Sida dalalku xuduudaha u leeyihiin ayay shaqsiyaadkuna u leeyihiin xuduudo. Dadkana dhaqankooda markaad fahamto waxaad ka nabadgelaysaa dhibtooda. Tusaale ahaan hadaad bus/ bas raacdo Sweden dhexdeeda waxaa laga yaabaa inaad aragtid dadka oo qof waliba wax hoos u akhriyayo ama u dhegeysanayo iyo 3 ruux oo Soomaali ah oo mid tellefoonka ku hadlayo isaga oo codkiisu sareeyo, labadana kalana wada sheekaysanayaa iyaga oo codkoodu aad taagtaagan yahay, dadka intiisa kalana karahsanayaan oo fiirinayaan. Taasi runtii sharci ahaan cidina kaama joojin karto laakiin inaga ayay waajib inagu tahay inaynu fahanno sida dadku u nool yahay iyo sida uu u fekerayo. Hadaba dhaqanka dadka oo aad fahantaa waxa uu kaa badbaadinayaa xadgudubyo badan oo kusoo gaari lahaa ka hor inta aan sharciba la isla tiigsan. Uma jeedo dhaqankaaga bedel laakiin dadkan aynu wadanka ugu nimi dhaqankooda halagu ixtiraamo.
in ey ka diido ayaa habooneyd 8000 kun miyaa macno leh
Inkasto an raali ka aheyn in gabadh gacan loqaado ciid kastaba ahaatee , laakin ma mooda iney bulshadeena Somaliyeed si qaaldan u socdàn mararka qaarkood , AnigavSomaaliga aya dhobsada telefonka sidan uku hadalno
nin ka leh anigaba waa dibsadaa telka lagu hadlayo walaal waxan ku weydii nayaa iminsa sano ayaad joogtaa yurub
xaliimooyinka dhegta iyo xijaabka telka ku haaya meelaha publikada ah naga haaya oo qaylinaya waa dhaqan xun wadankiina ma joogtan cadaanka xitaa hoostaada asaga oo fadhiya maqli maysid markuu telka ku hadlaayo ama waxow dhahaa hadda mashquul aan ahay anigaa ku soo wacaayo marka adinkana shukaansi iyo maala yacni aad dadka dhexdooda ku qaylisaan sida meelaha buseska,tareemada iwm ee ka waantooba waa iga dardaaran dhaqanka wadanka aad u soo guurteena la qabsada sis and bros